China Smart 5 modes Adult Sonic Electric Toothbrush EA310 Mugadziri uye Mutengesi | Charmhome
Rudzi rweBhatiri DC 3.7V, 800mAh Lithium Bhatiri
Kukura kwechigadzirwa Φ28 * 255mm
Net Kurema 100g
3.5 modes (Yakachena, Ichena, ChiPolish, Yakaoma, Inonzwisisa) inogona kusarudzwa kuchenesa zino.
5.Vibration 31000 kurohwa / min
6.100 mazuva ekumhanyisa bhatiri mushure maawa 8-10 ekuchaja.
1.Acoustic vibration yakachena tekinoroji: Sonic bhurasho remazino kutenderedza pane 31000 kurohwa-Nakidzwa nemazino akachena uye ane hutano, chengetedza kunyemwerera kwako kwekuvimba. Wana kuchenesa kwakakwana neruzha rwakadzikiswa, uye nekunyatso kuvandudza hutano hwako hwemuromo mumazuva gumi nemana chete.
2.5 NZIRA DZOKUSHANDISA MITANDA YAKASHURE - DZAKACHENA, DZVAKACHENA, POLISI, RINONYANYA, DZINOGONESESA kuti dzienderane nezvinodiwa zvakasiyana zvekuchengeta mukanwa: senge chibooreso, kuzadza, korona, uye veneers, uye zvinobatsira kudzivirira maburi kuvandudza chingamu hutano.
3. Inoenderana neyese sosi sosi, ino yemagetsi toothbruh ichavharira auto mushure mekuchaja izere uye yakavakwa mune yakaderera bhatiri yekuyeuchidza. Dhizaini inotakurika uye hupenyu hurefu hwebhatiri inotsigirwa nechaji yeUSB (isina adapta) uye iri nyore kushandisa pamba kana kufamba - kuunza parwendo rupi nerupi nyore kushandisa adapta uye tambo yeUSB.
4.Waterproof: IPX7 isina mvura ichave yakachengeteka kwazvo kwauri uye bhurasho rezino, hapana chero mubvunzo kunyangwe ukashandisa bhurasho rezino kana iwe uchigeza kana kuichenesa mumvura.
5.BRISTLE FADING REMINDER yekukupa iwe hutano & hwakawanda ruzivo.
Zvadaro: Denderedzwa Kufamba Chikwambo Chemazino Case CHC001
Ultrasonic Akangwara Otomatiki ELectricToothb ...